TOAMASINA : Karnavaly no nanokafan’ireo mpomba an-dRajoelina ny praopagandy
Vao nisokatra ny datin’ny fampielezan-kevitra, dia nampiseho ny tanjany sahady ireo mpomba ny kandida laharana faha-13 ao anaty bileta tokana, Andry Rajoelina. 9 octobre 2018
Na mbola tsy tonga tany an-toerana ny kandidà tohanan’izy ireo dia tonga maro ireo mpanahana ny kandidà laharana faha-13. Niainga avy teo anoloan’ny kianja mitafo Soavita nyfilaharambe na ny karnavaly. Nandalo tao Tanamakoa, Valpinson, Ankirihiry, Tanambao Fahadimy, ary nofa-ranana teo amin’ny araben’ny fahaleovantena manoloana ny tranombarotra Shoprite.
Tomefy olona maro hatrany ny lalana rehetra nolalovana. Voaporofo koa fa matotra sy havanana amin’ny fikarakarana hetsika goavana ireo mpitarika ny Komity mpanohana an’i Andry Rajoelina eto Toamasina.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (323) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (168) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (113) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (84) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (82) 24 novembre 2020